‘सरकारका विरुद्ध जनआक्रोश बढ्नु र प्रदर्शनहरु हुनु स्वभाविक थियो ‘ काठमाडौं, २३ साउन । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसले कोरोना भाइरस सङ्क्रमणको रोकथाम र उपचारलाई थप प्रभावकारी बनाउनुपर्ने मा...
अनसनरत युवाहरुको मागमा गम्भीर बन्न कांग्रेसको आग्रह
काठमाडौं- प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले अनसनरत युवाहरुको मागमा गम्भीर बन्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ । शुक्रबार विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रवक्ता विश्व प्रकाश शर्माले युवाहरु अनशनमा बसेको बीस दि...
कांग्रेसको प्रश्न- अनशनकारीका माग पूरा गर्न कुन साइत कुर्दै हुनुहुन्छ प्रधानमन्त्रीज्यू?
काठमाडौं, साउन २३ : कोरोना परीक्षणको दायरा बढाउन माग राख्दै अनशन बसेका इनअफ इज इनअफका ईः सहितका अनशनकारीसँगको माग पूरा नगरेको भन्दै कांग्रेसले आपत्ति जनाएको छ। कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्मा...
अनशनरत युवाका माग पुरा गर्न गम्भीरता देखाउः कांग्रेस
नेपाली कांग्रेसले अनशनकारी युवाहरुका माग तत्काल पुरा गर्न सरकारसँग माग गरेको छ। शुक्रबार विज्ञप्ति प्रकाशित गरी प्रवक्ता विश्व प्रकाश शर्माले युवाहरु अनशनमा बसेको बीस दिन पूरा भई सक्दा समेत संवाद ...
फाइल फोटो काठमाडौं । नेपाली काँग्रेसले आमरण अनशनमा बसेका युवाको माग सम्बोधनका सरकारसँग आग्रह गरेको छ । कोभिड–१९ विरुद्ध सरकारको प्रभावकारी र पारदर्शी पहल माग गरेर ईः (इशान अधिकारी) २० दिनदेखि आमरण...
नयाँ पत्रिका काठमाडौं २०७७ श्रावण २३ शुक्रबार १५:५०:०० जनस्वास्थ्यको क्षेत्रमा प्रभावकारी काम गर्न सरकारलाई दबाब दिन अनसन बसेका युवासँग वार्ता नगरेको भन्दै प्रतिपक्षी दल कांग्रेसले आपत्ति जनाएको...
काठमाडौँ — कोरोना परीक्षणको दायरा बढाउनलेलगायत माग राखेर अनशन बसेका अनशनकारीसँग तत्काल वार्ता गर्न कांग्रेसले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग माग गरेको छ । साइत नकुरी अनशनकारीसँग वार्ताको पहल गर्न ...
प्रधानमन्त्रीलाई कांग्रेसको प्रश्न- अनशनकारीसँग संवाद गर्न कुन साइत कुर्दै हुनुहुन्छ ?
काठमाडौं- प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले अनशनकारीसँग संवाद गर्न र समाधान खोज्न कुन साइत कुर्दै हुनुहुन्छ भन्दै प्रश्न गरेको छ। प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले विज्ञप्ति जारी गर्दै विभिन्न माग...
कांग्रेसले भन्यो– प्रधानमन्त्रीज्यु ! अनशनकारीले न सत्ता मागेका छन् न भत्ता, वार्ता गर्न किन साइत कुरेको ?
काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसले सरकारमा जिम्मेवारीवोध र शासकीय क्षमता नभएको निष्कर्ष निकालेको छ । कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले विज्ञप्ति जारी गरेर आमरण अनशनमा रहेका युवाहरुसँ...
काठमाडौं, साउन २३ । प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले अनशनरत इनफ इज इनफ का अभियन्ता ई लगायतको माग पूरा गर्न सरकारसँग माग गरेको छ । पार्टी प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले शुक्रबार विज्ञप्ति जारी गर्...
कोरोनाविरुद्धको सङ्घर्षमा युद्धस्तरमा कार्य गर्न काँग्रेसले शुरुआतदेखि नै विभिन्न सुझाव र मागअघि सार्दै आएको उल्लेख गर्दै उनले पर्याप्त स्वास्थ्य सामग्री व्यवस्थापन, खरिदमा भएको भ्रष्टाचारमा कारवाह...